CIYAARAHA | Somalia News
XOG: Waare oo laga diiday inuu ka baxo Muqdisho & Xasaanadii oo lagala wareegay
Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ka joojisay safar manata uu ku tegi lahaa magaalada Jowhar ee xarunta Dowlad goboleedka Hirshabeelle, halkaas oo ay ka socoto qaban qaabada doorashada maamulkaas. Ilo xog ogaal ah oo ka tirsan madaxtooyada Hirshabeelle, ayaa inoo sheegay in madaxweynaha Waare laga celiyay Garoonka Aadan cadde, xilli uu doonayay inuu u duulo magaalada Jowhar. Saraakiil ka tirsan Imigrationka Garoonka Aadan Cadde ayaa u sheegay madaxweynaha in lagu wargeliyay inuusan Garoonka ka dhoofin karin madaxweyne iyo wafdi uu hoggaaminayo ee maanta ku wajahnaa magaalada Jowhar, xilli xaalad adag ka taagan doorashada maamulka Hirshabeelle oo lagu muransan yahay. Lama oga sababta, Dowladda Federaalka madaxa uga taagan tahay madaxweyne Waare oo waqtigiisa xil heynta dhammaayay, kaas oo dhexda kaga jira qalalaaso siyaasadeed oo kaga imaanaya Beesha uu ka soo jeeda ee Xawaadle oo wax ku leh dhismaha maamulka Hirshabeelle. Arrimaha ka socda magaalada Jowhar waxaa horboodaya Villa Soomaaliya gaar ahaan Taliyaha Nabad sugida Fahad Yaasiin oo la wareegay Faaylka dhismaha maamulkaas gaar ahaan soo xulista Baarlamaanka. Waxgaradka Beesha Xawaadle ayaa qaadacay shirarka ka socda Jowhar, waxayna sheegeen iney jiraan faragelin xooggan oo ka imaaneysa Muqdisho. Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp
Somaliland suspends discussions with UN over humanitarian projects
Puntland oo qirtay in Shabaab ay ku sugan yihiin meelo ka mid ah Sanaag
Garoowe (Caasimada Online) – Taliyaha ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka Puntland ee gobolka Sanaag General Cabdullahi Cumar Canshuur ayaa markii ugu horreysay ka hadlay wararka sheegaya in Al-Shabaab ay gudaha u galeen gobolkaasi. Canshuur oo wareysi siiyey laanta afka Soomaaliga ee BBC-da ayaa xaqiijiyey in Al-Shabaab ay si dhuumaaleysi ah ku joogaan meelo ka mid ah […] The post Puntland oo qirtay in Shabaab ay ku sugan yihiin meelo ka mid ah Sanaag first appeared on Caasimada Online.
Ciidamada Dowlada oo bur burin ku bilaabay dhul uu sheegtay in uu leeyahay Wiil uu dhalay Siyaad Barre
Cabdi Cade - October 26, 2020 0
Wararka ka imaanaya degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose ayaa sheegaya in saakay ciidamada dowlada Soomaaliya oo wata katarabiilo bur burin ku bilaabeen xaafada Imbagaati ee kutaala degmada Afgooye. Dadka degan xaafadan ayaa saakay mar qura ka war helay ciidamo hubeesan oo bur burin ku bilaabay guryahooda, waxaana ciidamada dadka u adeegsanayeen awood iyagoona guryaha […] The post Ciidamada Dowlada oo bur burin ku bilaabay dhul uu sheegtay in uu leeyahay Wiil uu dhalay Siyaad Barre appeared first on Allbanaadir.com.
Faransiiska oo ka cabanaya qaadacaadda ay ku sameeyeen qaar ka mid ah dalalka Carabta.
Dowladda Faransiiska ayaa dalalka Bariga dhexe ugu baaqday inay ka hortagaan dukaamadda iyo ganacsiyada qaadacay alaabaha dalkaas, kadib markii uu Madaxweyne Emmanuel Macron difaacay in la baahiyo sawir lagu tilmaamay Nebi Maxamed NNKH. Wasaaradda arimaha dibedda ee Faransiiska ayaa sheegtay in baaqyada lagu qaadacayo alaabta Faransiiska lagu saleeyay go’aanno runta ka fog, oo ay dabada ka riixayaan dad xagjir ah oo kooban. Alaabaha Faransiiska ayaa laga saaray dukaamo ku yaal Kuawait, Urdun iyo Qatar, halka dibedbaxyo kooban oo Faransiiska ka dhan ah ay ka dhaceen Liibiya, Gaza iyo waqooyiga Suuriya. Fal celintan ayaa waxay salka ku haysaa faallooyin uu bixiyay Mr Macron ka dib dilkii loo geystay macalin Faransiis ah oo sawir gacmeedyo uu muujiyay Nebi Muxamed NNKH, tusay ardaydii fasalka ku jirtay. Madaxweynaha ayaa sheegay in macallinka, oo lagu magacaabo Samuel Paty, “loo dilay sababta oo ah Islaamiyiintu waxay rabaan mustaqbalkeenna”, laakiin Faransiisku “kama quusan doono sawir gacmeedyada”. Sawiradda Nabi Muxamed NNKH waxay muslimiinta u horseedi kartaa ciqaab culus sababtoo Islaamka wuxuu si cad u mamnuucayaa sawirrada Nabi Muxammad iyo Allaah SW. Laakiin cilmaaniyadda dalka Faransiiska ayaa waxay udub dhexaad u tahay aqoonsiga qaranka Faransiiska. Faransiiska ayaa sheegay in xakamaynta xorriyatul qowlka si loo ilaaliyo dareenka koox gaar ah, ay wiiqayso midnimada dalka. Axadii, Mr Macron wuxuu laba jibaaray difaacidda qiimaha Faransiiska waxa uuna qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ku yiri: “Isma dhiibeyno, waligeen.” Hoggaamiyeyaasha siyaasadeed ee Turkiga iyo Pakistan ayaa ku gacan seyray Mr Macron, iyagoo ku eedeeyay inuusan ixtiraamin “xorriyadda caqiidada” iyo inuu takooray malaayiinta Muslimiinta ah ee ku nool Faransiiska. Axadii, Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in Mr Macron uu u baahan yahay “baaritaan dhanka Maskaxda ah. Hadalka Erdogan ayaa horseeday in Faransiiska ay dib ugu yeeraan safiirkooda u fadhiya Turkiga. Sidee ayay u ballaarantahay qaadacaadda alaabaha faransiiska? Qaar ka mid ah goobaha laga dukaameysto ee dalalka Urdun, Qatar iyo Kuwait ayaa ilaa Axaddii laga xayuubiyay alaabtii Faransiiska. Tusaale ahaan timaha macmalka ee lagu sameeyo Faransiiska iyo waxyaabaha la isku qurxiyo. Dalka Kuwait, ururka ganacsiga ee alaabta tafaariiqda ayaa amar ku bixiyay in la qaadaco badeecadaha Faransiiska. Wasaaradda arimaha dibedda ee Faransiiska ayaa sheegtay in baaqyada lagu qaadacayo alaabta Faransiiska lagu saleeyay go’aanno runta ka fog, oo ay dabada ka riixayaan dad xagjir ah oo kooban. Waxaa sidoo kale baraha bulshada dhex-wareegayay baaqyo dhanka online-ka ah oo dalalka Carabta lagu boorrinayo iney iyagana qaadacaan alaabaha Faransiiska. Xigasho:BBCSomali
Tartanka Kubadda cagta degmooyinka oo galabta ka furmay garoonka Eng, Yariisow “SAWIRRO”
FIFA oo garoon caalami ah u aqoonsatay Garoonka kubadda Cagta ee Muqdisho
Ra’iisalwasaare Rooble oo dib uga furay Muqdishu waddo muddo dheer Xirnayd
Muqdishu0(SONNA)- Ra’iisul Wasaaraha Dowlada Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo uu wehliyo Kusimaha Duqa Muqdisho Ahna Guddoomiye Kuxigeenka Maamulka iyo Maaliyadda Axmed Xasan Iimaan ayaa caawa si wadajir ah u furay Wadada xiriirisa KM4 illaa iyo Tarabuunka, taasi oo muddo sanado ah xirneed, Madama ay halkaasi isu bad-badaleen Safaaradaha Turkiya iyo Qatar. Guddoomiye Kuxigeenka Howlaha Guud ee Maamulka Gobolka Banaadir Enj.Cumar Cali Cabdi iyo Taliyaha Qeybta Guud ee Booliska Gobolka Banaadir Saadaq Cumar Xasan iyo Saraakiil kale ayaa goob-joog ka ahaa furitaanka wadadaan oo muhiim u ah isu-socodka shacabka Muqdisho, kana mid ah wadooyinka Halbowlaha ah ee Magalaada. Muddooyinkaan danbe ayey Maamulka Gobolka Banaadir iyo Dowlada Federaalka Soomaaliya waxa ay ku mashquulsanaayeen sidii loo furi lahaa wadooyinka Muhiimka ah ee Magaalada Muqdisho.
Akhriso: RW Rooble oo 10-sano ka dib, furay Waddo muhiim u ah Shacabka Muqdisho
Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa kormeeray Jidka Tarabuunka oo halboowle u ah isu socodka Caasimadda, si uu u hubiyo fulinta amarkii ku aaddanaa isu socodka bulshada iyo gaadiidka ee uu faray Laamaha Ammaanka. Ra’iisul Wasaaraha ayaa tilmaamay in furitaanka waddadan oo xirnayd ku dhawaad 10 sano ay muujinayso isku-tashiga iyo wadashaqeynta Laamaha amniga iyo shacabka Caasimadda oo ay ka go’an tahay in ay si qorsheysan ku wajahaan duruufaha amniga, una midoobaan xasilinta Caasimadda. “Bulshada Caasimadda waxa ay nala wadaageen sida ay uga go’an tahay in ay la shaqeeyaan Laamaha amniga oo wakhti kasta u taagan badqabka nafta iyo maalka muwaadiniinta Soomaaliyeed. Qof kasta waxaa waajib Qaran ku ah fashilinta dhagarta ay dadkeenna u soo maleegayaan argagixisadu.” Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa ku bogaadiyey Taliska Booliska Ciidanka Soomaaliyeed iyo Maamulka Gobolka Banaadir hirgelinta qorshahan culeyska lagaga dulqaadayo isu socodka Caasimadda, waxa uuna ku adkeeyey in ay sii dhammeystiraan, korna u qaadaan wadashaqeynta dhanka amniga ee ay la leeyihiin Shacabka. Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa uga mahadceliyey ganacsatada iyo qeybaha kale ee bulshada dhabar adeega ay ku wajaheen durufiihi ka dhashay xirnaanta waddooyinka, isagoo tilmaamay in ay qeyb ka ahayd dadaalladii lagaga hortageyey weerarada Al-Shabaab. Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp
Somaliland oo Go’aan ka soo saartay Hay’adaha QM & Howlgalka ay ka wadaan..
Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp Soomaaliland ayaa ku dhawaaqday inay hakisay dhamaan Shaqooyinkii iyo howlihii kale oo ay hay’adaha Qaramada Midoobay ka wadeen degaannada kala duwan ee Maamulkaas. Qoraal kasoo baxay Wasaaradda Qorshaynta & Horumarinta Somaliland ayaa waxaa lagu sheegay in la hakiyay wada-shaqeyntii ka dhaxeysay Soomaaliland iyo Hay’adaha Qaramada Midoobay. Wasaaradda ayaan weli shaacin sababaha tallaabadaaas ay ku qaadeen, hayeeshee ay sheegeen in Go’aankaas uu ka dhaqan galay degaannada Soomaaliland shalay oo taariikhdu ku beegneyd 25/10/2020. Xogaha ay Risaala heshay ee ku aadan go’aanka kasoo baxay Soomaaliland ayaa waxaa ay sheegayaan inay sabab u tahay heshiis ay dhawaan QM la saxiixatay Dowladda Federaalka, kaas oo sheegayay in dowlada federalka Soomaaliya lasoo marsiinayo dhammaan barnaamijyada Qaramada Midoobay ka fulinayso Soomaaliya, oo ay ku jirto Somaliland. Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp
Armenia iyo Azerbaijan oo isku raacay xabbad-joojin bani’aadamnimo
WAHINGTON (HALBEEG) – Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in Armenia iyo Azerbaijan ay oggolaadeen xabad-joojin cusub oo dhanka bani’aadamnimada ah. Xabad joojinta ayaa lagu dhawaaqay in ay billaabaneyso Isniinta gaar ahaan 8:00 subaxnimo waqtiga gobolka ilaa 12:00 habeennimo, sida lagu sheegay bayaan si wadajir ah uga soo baxay Waaxda Arrimaha Dibadda Mareykanka iyo dowladaha dagaalka uu ka dhaxeeyo ee Azerbaijan iyo Armenia. “Hambalyo ayaan u dirayaa Ra’iisul Wasaaraha Armenia Nikol Pashinyan iyo Madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev, oo oggolaaday in ay u hoggaansamaan xabad joojinta dhaqan galaysa saqda dhexe” ayuu bartiisa Twitterka ku soo qoray Donald Trump madaxweynaha Mareykanka. Ku dhawaaqista xabbad joojinta ayaa imaaneysa iyadoo Jimcihii uu Washington kulamo gooni gooni ah uu kula yeeshay Xog-hayaha Arrimaha Dibadda Mareykanka Mike Pompeo labada Wasiir Arrimo dibbadeed ee dalalka Armenia iyo Azerbaijan. Dagaalka labada dal ayaa ka qarxay gobolka lagu muransanyahay ee Nagorno-Karabakh dabayaaqadii bishii Sebteembar, waana dagaalkii ugu xumaa ee labada dhinac tan iyo 1990-naadkii. Post Views:20 Related Let’s block ads! (Why?)
Liiska Xildhibaanada Hirshabelle oo Muqdisho lagu diyaariyay iyo Odayaasha Dhaqanka oo…
- Advertisement - Magaalada Jowhar ee caasimada maamulka Hirshabelle waxaa xiligan ku sugan qaar badan oo kamid ah Waxgaradka iyo siyaasiyiinta kasoo jeeda beelaha Dega gobolada Shabeelaha Dhaxe iyo Hiiraan. Waxaa ka socda magaaladaasi shirar gaar gaar ah oo looga arinsanayo dhismaha maamulka cusub ee Hirshabelle iyo soo xulida Baarlamaanka labaad uu yeesho maamulkaasi , waxaana la filayaa in dhawaan la shaaciyo Baarlamaanka cusub. Warar lagu kalsoonaan karo oon helnay ayaa sheegaya in uu diyaarsan yahay liiska Xildhibaanada kamid noqonaya Baarlamaanka labaad ee Hirshabelle, waxaana magacyada xubnahan gacanta ku haya guddiga farsamada iyo maamul dhisida Hirshabelle. Liiska Xildhibaanadan ayaa la sheegay in lagu diyaariyay magaalada Muqdisho, waxaana la tilmaamay in Odayaasha beelaha ee xaqa u lahaa soo xulista Xildhibaanadan kaliya loo gudbiyay liiskan laguna qasbay in ay saxiixaan si iyana dhaqaale loo siiyo. Xildhibaanadan oo la sheegay in isla diyaariyeen Villa Soomaaliya iyo taliska Hay’adda NISA ayaa ujeedka yahay in ay soo saaraan Madaxweynaha ay rabto Villa Soomaaliya sidoo kale soo doortaan Xubnaha Aqalka sare ee dooneyso Villa Soomaaliya. Dhisida Maamulka Hirshabelle ayaa u muuqda mid loo marayo sida kii Galmudug loo maray oo dowladu iyadu diyaarisay Xildhibaanada kamid noqonayay Baarlamaankaasi kuwaa oo kadib soo doortay Musharaxii dowlada Federaalka rabtay. Dowlada Federaalka Soomaaliya ayaana la dooneysa in xilka Madaxweynaha Hirshabelle loo doorto Cali Guudlaawe oo hada ah Madaxweyne kuxigeenka maamulkaasi halka Madaxweyne kuxigeena la siinayo Yuusuf Dabageed. Madaxweynaha Waqtigiisu dhamaaday ee Maxamed Cabdi Waare ayaan talo iyo tusaale badan ku laheyn dhismaha maamulkan cusub, waxaana hada ka awood badan Cali Guudlaawe oo taageero ka helaya Villa Soomaaliya. Xafiiska Shabakada Allbanaadir.comMuqdisho [email protected] - Advertisement -
Updated on October 26, 2020 7:12 am